माइतिघर तिम्रो होईन – NEPÆNGLISH
माइतिघर तिम्रो होईन
Nepali Wedding 2
Photo courtesy by A Fish Called Amy
तपाईंहरूलाई नेपाली कला क्षेत्रका गायक स्व द्वारिका लाल जोशीको एउटा गीत याद होला । नयाँ पुस्तालाई नहुन पनि सक्छ अहिलेको यो रिमिक्स जमानामा । “माइतिघर तिम्रो होईन पराइ घर जाऊ, कहिलेकाहिँ बिदा लिइ जन्म घर आऊ” । हो, यहि गीत पहिले रेडियो नेपालमा खुब घन्किन्थ्यो । फर्माइसी पनि धेरै नै हुन्थ्यो । तर समय बदलिसकेको छ । यस्ता पूराना आधुनिक गीतको त अब पारखी भेट्न पनि गाह्रो हुँदैछ । तर मन पराउने श्रोतानै नभएको भने होईन । फरक यति हो कि अहिलेको रक, पप, रिमिक्स र अन्य के के विधाका गीतहरूको चलनचल्ती बढेको बेला यस्ता आधुनिक गीतको पारो अलिकति बजारमा घटेको जस्तो मात्र देखिएको हो । अहिले पनि राम कृष्ण ढकाल, यम बराल, र आनन्द कार्कीजस्ता गायकहरू “ओ या, यो वा” जस्ता शब्दहरू नराखिकनै नेपाली सांगितिक बजारमा बिकेकैछन् क्यार !
प्रशङ्ग नेपाली गीति बजारको नभै माथिको गीतको शब्दको तात्पर्य अहिलेको समयमा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुराको हो । हाल जता पनि महिला हक-हितका कुरा छन् । महिलाले पाउनुपर्ने समान अधिकारका कुरा छन् । राष्ट्रियस्तरमा यस्ता कुराहरूमा बहस भैरहेको बेला प्वाक्क् यो गीत सरकारी मिडिया रेडियो नेपालले बजाइदियो भने त सरकारको सूचनामन्त्री अनि देशको प्रधानमन्त्रीले कसरी सच्यौउने होला कि उनिहरू महिला हक-हितका विरूद्धमा छैनौं बनेर ? अनि महिलाको अधिकारका लागि भनि विदेशी डलरमा चलेका हाम्रा देशका गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूले कसरी यसलाई लिने हुन् ? गीतमा त सिधै बोल छ, “माइतिघर तिम्रो होइन” । अब परेन फसाद !!!
Satya Maharjan January 28, 2010 March 27, 2016 Mixed Bag
Next Next post: के यो टोल अबको केहि वर्षमा पनि यस्तै नै रहला ?